Ekpere nye nwa agbọghọ na -amaghị nwoke nke Guadalupe. ? Nchedo, Amparo na Ọrụ Ebube
Ekpere nye Nwa Agbọghọ Na-amaghị Nwoke si Guadalupe bulie ya elu site n'okwukwe na obi site na iji obi umeala na-ekpughe uche nke obi mmadu nwere ịrịọ maka enyemaka n’aka ndi ime mmụọ.
N’agbanyeghi oge anyi n’abia n’oge a, ndi mmadu no na ekene n’ekpe ekpere.
Onweghi ihe a gaghi ekwe omume ma anyi were ekpere a dika ngwa agha anyi ji agha agha nke na aga n’ihu anyi ubochi.
Anyị nwere ike ịrịọ maka ihe dị anyị mkpa, yabụ ihe ndị ahụ abụrụla nrọ anyị na agụụ anyị, nke ka na-echekwa mkpụrụ obi anyị ma ọ nweghị onye maara.
1 Ekele diri Nwa Ahu Nwaanyi nke Guadalupe Onye bu nwanyi amuru na Guadalupe?
1.1 Ekpere nke Nwaada nke Guadalupe maka nchebe
1.2 Ekpere ị rịọ maka nchebe maka Nwa agbọghọ nke Guadalupe
1.3 Ekpere na-amaghị nwoke nke Guadalupe ịrịọ maka ọrụ ebube
2 Enwere m ike ikpe ekpere niile?
Ekele diri Nwaada nke Guadalupe Isnye bụ nwanyị na-amaghị nwoke nke Guadalupe?
Ọ bụ ngosipụta nke Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke na nwanyị na 1531 na Mexico.
A maara na onye mbụ hụrụ ya bụ onye Indian Juan Diego mgbe ọ na-aga ịhịa aka.
Ọ na-agwa akụkọ ahụ na nwa agbọghọ ahụ jụrụ ya ka ọ rụọ ụlọ nsọ ma zie mmadụ niile nwere ike ịmalite bishọp ozi.
Onye Indian Juan Diego mere nke ahụ, ihe niile enyere ya n'aka, ọ dịghị nfe n'ihi na ọ nweghị onye kwenyere ya n'ihi na, dịka ọrụ ebube ọ bụla, ọ dị mkpa ịhụ ụfọdụ ihe ịrịba ama na ihe Indian kwuru bụ eziokwu.
storia na nwa agbọghọ ahụ jụrụ ya ka ọ rụọ ụlọ nsọ na nke ahụ zisaara mmadụ niile ozi enwere ike ịmalite site na bishọp.
Ndi Indian Juan Diego mere nke a, ihe obula dika enyere ya, odighi nfe n’ihi na odighi onye kwere na ya n’ihi na, dika oru ebube obula, odi nkpa ka egosiputara na ihe ndi India kwuru bu eziokwu.
Ndi India natara ntuzi aka ohuru n’aka Virgin ebe enyere ya icho Roses di n’elu ugwu ahu, o rubere isi ozo ma choo Roses ohuru n’enye ha bishop kechie blanket, Mgbe Roses dara na blanketị, enwere ike ịhụ ihe osise a maara taa dị ka Nwa agbọghọ nke Guadalupe.
Taa, basilica nke Santa María de Guadalupe abụrụla ụlọ nsọ okpukpe kacha eleta n'ụwa.
Ihe dị ka iri nde ndị parish Ha na-abịa kwa afọ iji gosipụta okwukwe ha na ịtụ ụtụ maka nwanyị a na-amaghị nwoke dị ebube.
Ekpere nke Nwaada nke Guadalupe maka nchebe
Nwa nwanyi di ngozi nke Guadalupe, nne nke Chukwu, Nwanyi na nne anyi. Bịa ebe a kpọọ isiala n'ihu ihe oyiyi gị dị nsọ, nke ị hapụrụ anyị zọpụtara na ntuziaka Juan Diego, dị ka nkwa nke ịhụnanya, ịdị mma na ebere.
Okwu ị gwara Juan nwere ọmịiko na -enweghị atụ ka na -ada ụda: "Nwa m hụrụ n'anya nke ukwuu, Juan onye m hụrụ n'anya dị ka onye dị obere ma dịkwa nro," mgbe, na -enwu mara mma, ị pụtara n'ihu ya n'elu ugwu Tepeyac. Mee ka anyị kweta ịnụ otu okwu ndị ahụ n'ime mkpụrụ obi anyị.
Ee, ị bụ nne anyị; nne Chukwu bụ nne anyị, Onye kachasị obi ọmịiko, onye kachasị nwee ọmiko.
Ma bụrụ nne anyị ma chebe anyị n'okpuru uwe mkpuchi gị, ị nọrọ n'ọnọdụ gị nke Guadalupe. Nwanyị Dị Nsọ nke Guadalupe, gosi na ị bụ nne anyị.
Chebe anyị na ọnwụnwa, kasie anyị obi na iru uju, ma nyere anyị aka na mkpa anyị niile.
Na ihe egwu, na ọrịa, na mkpagbu, na obi ilu, na gbahapụrụ, n'oge awa nke ọnwụ anyị, jiri anya ọmịiko lelee anyị ma ghara ịnọpụ iche n'ebe anyị nọ.
Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, dịka ezigbo nne, maara otu esi eweta nchebe siri ike na eziokwu nye ndị niile ghọtara ya dịka nne.
Achingbịakwute ya na-achọ nchebe bụ omume nke okwukwe, obi ike na eziokwu. Anyị nwere ike ịrịọ maka nchebe n’oge niile anyị chọrọ ya maka anyị, maka ndị ezinụlọ ma ọ bụ enyi anyị.
Enweredị ndị na-etinye ihe a n'ọrụ ekpere Maka ngwongwo ụfọdụ, akụkụ a nke ekpere nwere ike iyi ihe enweghị isi mana nne maara etu e si elekọta nwa ya na ihe niile ọ bụ.
Anyị enweghị ike ịga na-eche ya na ọ gaghị enyere anyị aka Kama iji obi ghe oghe igwa anyi okwu ma duzie anyi n’ihe anyi gha eme n’oge niile.
Ekpere ị rịọ maka nchebe maka Nwa agbọghọ nke Guadalupe
Oh Immaculate Virgin, nne nke ezi Chineke na nne nke !ka! Gị onye sitere ebe a gosipụta ebere na ọmịiko gị nye ndị niile na-arịọ maka nchebe gị; toaa ntị n’ekpere ahụ nke anyị ji obi ike kwadoo anyị ma kesaara ya Ọkpara gị Jizọs, naanị onye mgbapụta anyị.
Nne nke obi ebere, Nna-ukwu nke aja zoro ezo na nke dị nwayọ, maka gị, onye pụta ịbịakwute anyị, ndị mmehie, anyị doro nsọ anyị niile na ịhụnanya anyị niile.
Anyị na-edobe ndụ anyị, ọrụ anyị, ọ ourụ anyị, ọrịa anyị na ihe mgbu anyị.
Nye udo, Ikpe Ziri Ezi na ọganihu ndị anyị; ebe ọ bụ na ihe niile anyị nwere ma anyị nọ n’okpuru nlekọta gị, Nwaanyị na nne anyị.
Anyị chọrọ ịbụ nke gị kpamkpam ma soro gị jee ije n'ụzọ nke ikwesi ntụkwasị obi zuru oke nye Jizọs Kraịst na Nzukọ Ya: ekwela ka aka gị nke ịhụnanya.
Nwa agbọghọ nwanyị nke Guadalupe, nne nke Amerika, anyị na-arịọ gị maka ndị bishọp niile, ka ị duru ndị kwesịrị ntụkwasị obi n'okporo ụzọ ndụ Ndị Kraịst siri ike, ịhụnanya na obi umeala nye Chineke na mkpụrụ obi.
Chee echiche banyere owuwe ihe ubi a, ma rịọ Onye-nwe ka o mee ka agụụ nwee ume maka ịdị nsọ na ndị Chineke niile, ma nyekwa ọtụtụ ndị ụkọchukwu na ndị okpukperechi, okwukwe siri ike na ndị na-ekwupụta ihe omimi nke Chukwu.
Nchedo, lekọta, ịhụnanya, ndo na ihe niile ị chọrọ ịrịọ ya, ntị ya dị njikere ịnụ ntughari nke ụmụ ya.
Okwukwe bu ihe di nkpa
N’okwu nke Chukwu ha kọwaara anyị na anyị kwesịrị ịrịọ ikwere na enwere, ya bụ, anyị kwesịrị ịhapụ ekpere anyị ebe anyị matara na a nụrụ ha, ma ọ bụ, karịa.
Amparo bụ ihe dị mkpa na onye kwesiri iju ajuju ka a choputa mkpali sitere n’obi.
Anyị amaghị ọdịnihu, ọ bụ ya mere ekpere a ji dị mkpa ịhapụ n'aka anyị atụmatụ anyị na usoro ọ bụla anyị na-achọ ime.
Ọ bụ ya mere ekpere nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nke Guadalupe ji dị mkpa.
Ka nchedo ya dịrị na ndụ anyị oge niile ma ngọzị ya agaghị ahapụ anyị na ndị ezinụlọ anyị na ndị enyi anyị.
Protectionrịọ nchebe maka onye pụrụ iche bụ omume ịhụnanya, ọ dịghị mkpa ịme kandụl ma ọ bụ kwadebe ebe dịbu gara aga maka ekpere a nwere ike iyi ka ọ dị ntakịrị mana ọ dị ike n'ezie, ị ga-ekwere, ọ nweghị ihe ọzọ dị mkpa.
Ekpere na-amaghị nwoke nke Guadalupe ịrịọ maka ọrụ ebube
Nwa nwanyi di ebube nke Guadalupe, nne na nwunye nke obodo anyi. Lee ka ị jiriworo obi umeala kpọọ isiala nye ihe oyiyi gị dị egwu.
(Debe gị iwu)
Gị ka anyị tụkwasịrị obi. Are bụ ndụ anyị na nkasi obi anyị.
Underbụ ịnọ n'okpuru ndò gị, na nne gị, anyị enweghị ike ịtụ egwu ihe ọ bụla.
Nyere anyị aka na njem ala anyị nke ụwa ma ịrịọchitere anyị arịrịọ n'ihu Ọkpara Chineke gị n'oge a ọnwụ, ka anyi we nweta nzoputa ebighi ebi nke nkpuru obi.
Ọrụ ebube bụ ihe ndị ahụ anyị kwenyere na ọ gaghị enwe ike iji ike ndị mmadụ mezuo.
Ọ bụ okwu eji karịa na arịrịọ maka ọrịa nke, dịka sayensị sayensị si kwuo, enweghị ọgwụgwọ.
Agbanyeghị, enwere ike iji okwu ọrụ ebube mee ihe n'ọtụtụ ọnọdụ ndị ọzọ dị ka n'ọnọdụ ndị ahụ ebe anyị na-eche ego na-agaghị ekwe omume ịbịarute ma ọ bụ mgbe nsogbu nke otu onye ezinụlọ mebiri ma si n'otu oge gaa na nke ọzọ na-egosi nchebe na ụda.
Ihe-iriba-ama di nso ikpe ekpere ma gosi obere okwukwe. O nweghị ihe agaghị ekwe omume.
Nwere ike wee kpee ekpere ndị a niile.
Ihe dị mkpa bụ na ejiri ọtụtụ okwukwe na ọtụtụ nkwenye kpee ekpere nke nwa agbọghọ nke Guadalupe.
Choro ikwere na ike nke senti a ma ikwesiri ikwere na ya ga enyere gi aka.